हिब्रू १ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१ परमेश्वरले धेरैअघि थुप्रै पटक अनि विभिन्न तरिकामा भविष्यवक्ताहरूमार्फत हाम्रा पुर्खाहरूसित बोल्नुभयो। २ यी दिनहरूको अन्तमा चाहिं उहाँले आफ्नो छोरामार्फत बोल्नुभएको छ, जसलाई उहाँले सबै कुराको उत्तराधिकारी तुल्याउनुभयो र जसद्वारा उहाँले ब्रह्माण्डका सबै कुरा बनाउनुभयो।* ३ उहाँ परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब अनि परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। आफ्नो शक्तिशाली वचनद्वारा उहाँले सबै कुरा सम्भाल्नुहुन्छ। हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट शुद्ध पारिसकेपछि उहाँ स्वर्गमा परमेश्वरको दाहिने हाततिर बस्नुभयो। ४ यसप्रकार उहाँ स्वर्गदूतहरूभन्दा श्रेष्ठ हुनुभएको छ, यहाँसम्म कि, उहाँले तिनीहरूको भन्दा उत्कृष्ट नाम हासिल गर्नुभएको छ। ५ उदाहरणका लागि, के परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूतहरूमध्ये कसैलाई कहिल्यै यसो भन्नुभयो र: “तिमी मेरो छोरा हौ। म आज तिम्रो बुबा बनेको छु”? अनि फेरि: “म आफै उसको बुबा बन्नेछु अनि ऊ स्वयम् मेरो छोरा बन्नेछ”? ६ अनि आफ्नो पहिलो सन्तानलाई पृथ्वीमा फेरि पठाउँदा उहाँ भन्नुहुन्छ: “परमेश्वरका सबै स्वर्गदूतले उसलाई दण्डवत्‌ गरून्‌।” ७ साथै, स्वर्गदूतहरूको विषयमा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ: “उहाँ आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई शक्तिशाली दल* बनाउनुहुन्छ अनि आफ्ना जनसेवकहरूलाई चाहिं आगोको ज्वाला।” ८ तर आफ्नो छोराको विषयमा भने उहाँ भन्नुहुन्छ: “परमेश्वर सदासर्वदा तिम्रो सिंहासन हुन्‌ अनि तिम्रो राज्यको राजदण्डचाहिं न्यायको राजदण्ड हो। ९ तिमीले सुकर्मलाई प्रेम अनि कुकर्मलाई घृणा गऱ्यौ। त्यसैले परमेश्वरले, तिम्रै परमेश्वरले तिमीलाई तिम्रा मित्रहरूलाई भन्दा बढ्ता हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुभयो।” १० अनि: “हे प्रभु, तपाईंले प्रारम्भमै पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो अनि आकाश तपाईंकै हातको रचना हो। ११ तिनीहरू नाश हुनेछन्‌ तर तपाईं भने सधैंभरि रहिरहनुहुनेछ। लुगाजस्तै तिनीहरू सब पुराना भएर जानेछन्‌, १२ अनि खास्टोलाई पोको पारेजस्तै तपाईंले तिनीहरूलाई पोको पार्नुहुनेछ र पुरानो लुगा फेरेजस्तै फेर्नुहुनेछ। तर तपाईं भने जस्ताको तस्तै हुनुहुन्छ अनि तपाईंको आयु कहिल्यै सिद्धिनेछैन।” १३ त्यसैगरि, आफ्ना स्वर्गदूतहरूमध्ये कसैको विषयमा उहाँले कहिल्यै यसो भन्नुभएको छ र: “तिमी मेरो दाहिने हाततिर बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रो पाउदान तुल्याउँदिनँ”? १४ के तिनीहरू सबै जना उद्धार पाउनेहरूको सेवा गर्न पठाइएका जनसेवा गर्ने स्वर्गदूतहरू होइनन्‌?
^ हिब्रू १:२ * वा, “युगको थालनी गर्नुभयो।”
^ हिब्रू १:७ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।